Madaxweyne Siilaanyo iyo Wefti uu Hoggaaminayo oo u kicitimay Imaaraadka carabta | Somaliland.Org
June 27, 2012	a href=”http://www.somaliland.org/images/b/2012/06/dhoof21.jpg”>HARGEYSA (Somaliland.Org)- Madaxweynaha Somaliland iyo Wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta socdaal ugu kicitamay Dalka Isutagga imaaraatka Carabta, iyagoo halkaa kaga qayb geli doona wejigii labaad ee wadahadalada Somaliland ay kula xaajoonayso dalka Somalia oo ay xornimadeeda kala soo noqotay 21 sanadood ka hor. waxaana lagu wadaa inay labadda Madaxweyne kulan yeeshaan maalinta Axadda ee fooda inagu soo haysa.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed (Siilaanyo) oo madaarka Berbera kula hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in socdaalayo dalka Imaaraadka carabta oo uu kulan kula qaadan doono Madaxweynaha dawladda TFG-da Somalia. waxaanu tilmaamay in wada hadaladani ay daba socdaan shirarkii London lagu qabtay.
“Waxaanu Aniga iyo Weftiga ila socdaaba Haddii ALLE ka dhigo aanu is arki doonaa Madaxweynihii Soomaaliya iyo cidii la socota. Safarkayagan Imaaraadku wuxuu daba joogaa is-aragii labada dhinac ahaa ee dhawaan labada dal London isku arkeen. Waxa shirkan lagaga hadli doonaa wixii danaha labada dal ah. Somaliland waxay mar-walba ay difaacaysaa qaranimadeeda, gooni isu taageeda iyo siday u taagan tahay ee ay wadan madax banaan u tahay,”ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland.
Madaxweynuhu isagoo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Waa tii shirarkii London ka dhacay lagaga wada tashay inay Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan oo sidii lixdankii ay iskugu darsadeen Somaliland iyo Soomaaliya loo wada hadlo. Wada hadalkanna kuwaasi ayuu daba joogaa. Waxaanu noqonayaa mid heer madaxweyne ah oo ay is arkayaan Madaxweyneyaasha labada dal.”
“Markaa waxaanu rajaynaynaa inaanu sii xoojino wada hadaladaasi oo aanu qeexno madax-banaanidda Somaliland,”ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland.
Madaxweynaha waxaa socdaalkiisan ku wehelinaya Marwada koowaad ee dalka Somaliland Marwo Aamina Sh Maxamed Jirde, Gudoomiyaha xisbiga Mucaaradka ah ee UDUB Ahna Madaxweynahii hore ee Somaliland Md. Daahir Rayaale Kaahin iyo marwadiisa Hudda Barkhad, Gudoomiyaha Xisbiga Tallada Haya ee Kulmiye Md. Muuse Biixi Cabdi, Wasiirka Gaashaandhiga Md. Axmed Xaaji Cali Cadami, Afhayeenka Madaxtooyada Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse, xoghayaha gaarka ah ee Madaxweynaha iyo Maareeyaha dekadda Berbera Eng. Cali Cumar Maxamed (Xoor-xoor).
Madaxweyne Axmed Siilaanyo waxa madaarka Berbera ku sii sagootiyay Wasiiro iyo masuuliyiin tiro badan. waxaana uu madaarka salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan Ciidamadda qaranka. Madaxweynaha Somaliland iyo Weftigiisa waxa sii qaaday Diyaaradda DAALO AIR-LINE.
Madaxweynaha iyo weftigiisa oo maanta duhurkii gaadhay Magaalada Berbera ayaa waxaa halkaas si weyn ugu soo dhoweeyay maamulka Gobolka iyo ka degmada oo ay weheliyaan dadweynaha degmadaasi, halka sidoo kalena dhamaan deegaanada u dhexeeya magaalooyinka Hargaysa iyo Berbera ay dadweynahu weftiga madaxweynaha ku qaabilayeen niyad sami ay ku muujinayeen kalsoonidooda ku wajahan siday uga faraxsan yihiin guulaha ay dawlada Somaliland ka gaadhay kulamada iyo wadahadalada socda ee u dhexeeya Somaliland iyo Somalia, iyagoo sidoo kale dadweynuhu ka rajaynaya in natiijooyinka wadahadaladu noqdaan kuwo ka midho dhaliya aqoonsi ay Somaliland ka hesho beesha caalamka.
Previous PostSomaliland’s Foreign Policy: A Daring, Dedicated and Decisive PolicyNext PostMaayar Ismaaciil Xaji Nuur Oo Sheegay Inuu Baaqday Shir Beeleed Ceerigaabo	Blog